Naghachi Video & Photo si Handycam, 3D camcorder
> Resource> Naghachi> Sony camcorder Iweghachite: Naghachi Lost Videos & Photos
Ọ ga-agbake vidiyo si na m Sony camcorder?
M na mberede ehichapụ ụfọdụ vidio si m Sony Handycam HDR-CX56X camcorder. M na-eji m 2GB Sony ebe nchekwa mkpisi, na m maara na ihe niile faịlụ iwere na Handycam-echekwara na ya. M gbalịrị ka m na-arapara na jikọọ na ya na kọmputa m, ma na-ehichapụ videos na-adịghị gosiri n'ebe ahụ. Bụ n'ebe ọ bụla ohere iji weghachite m camcorder videos?
Ee, e nwere a ga-ekwe omume na-agbake ehichapụ vidiyo si na Sony camcorders. Mgbe ị na ozugbo ehichapụ videos si gị camcorder, e nweghị egweri biini ihe dị na kọmputa na-echekwa ehichapụ faịlụ, na a bụ ihe mere na ị pụghị ịhụ ha mgbe ị jikọọ ya na kọmputa gị.
Ma ehichapụ videos na-adịghị n'ezie arahụ, ma ọ bụ naanị na-adịghị ahụ anya na dị ka a overwritten site ọhụrụ faịlụ. Ya mere, ị nwere ike naputa ọ bụla faịlụ site na Sony camcorders dị ka Sony Handycam, 3D camcorder na ndị ọzọ.
Olee otú naghachi faịlụ site na Sony camcorder (videos & photos)
Tupu eme ihe ọ bụla ọzọ, na-a Sony camcorder mgbake omume ebe a: Wondershare Photo Iweghachite (dakọtara na Windows 8/7 / Vista / XP), ma ọ Wondershare Photo Recovery for Mac (maka Mavericks).
Ọzọ, ka na-agbalị foto mgbake maka Windows ọnụ ego nzọụkwụ na zuru ezu.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị Sony camcorder na kọmputa
Naghachi ehichapụ vidiyo si na Sony camcorder bụ n'ezie naghachi ha si ebe nchekwa mkpisi ji na camcorder. N'ihi ya, ị nwere ike họrọ kpọmkwem jikọọ gị camcorder na kọmputa na iji eriri USB, ma ọ bụ nanị jikọọ ebe nchekwa mkpisi na a kaadị agụ. Were ụzọ-amasị gị. Mgbe ahụ malite usoro ihe omume na "Malite" Sony camcorder mgbake.
Nzọụkwụ 2. iṅomi furu efu faịlụ na Sony camcorder / ebe nchekwa mkpisi
Ebe a, gị camcorder ma ọ bụ na ebe nchekwa mkpisi ga-apụta dị a mbanye akwụkwọ ozi. Họrọ ya na pịa "iṅomi" na-amalite na-achọ furu efu faịlụ site na ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 3. Preview na-agbake Sony camcorder photos, videos
Mgbe Doppler, niile recoverable faịlụ, gụnyere foto na vidiyo, ga-egosipụta na e depụtara na edemede. Ịnwere ike ihuchalu ma ego na-agbake ha niile na otu Pịa.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na gị Sony camcorder ma ọ bụ isi iyi na ebe nchekwa mkpisi ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa hà.
Video nkuzi nke Sony camcorder foto mgbake
MTS Iweghachite: Olee naghachi MTS Video faịlụ site Camcorders
Panasonic camcorder Iweghachite: Naghachi Lost Videos & Photos
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos si Nexus 4
Olee otú Igosi ACP-EP ebe nchekwa Data Recovery
Olee otú Naghachi Data si formatted nkebi
FLV Video Iweghachite: Naghachi ehichapụ ma ọ bụ Lost FLV Videos
Olee otú Naghachi formatted Photos